Saul Niguez oo shaaca ka qaaday sababtii uu uga soo tagay Kooxda Atletico Madrid & Laacibkii udub dhexaadka u ahaa inuu ku soo biiro Chelsea – Gool FM
(London) 01 Sebt 2021. Saxiixa cusub ee Kooxda Chelsea, Saul Niguez ayaa shaaca ka qaaday sababtii uu uga soo tagay Atletico Madrid iyo weliba laacibkii udub dhexaadka u ahaa inuu ku soo biiro Chelsea.
Kooxda Chelsea ayaa daqiiqadihii ugu dambeeyey suuqa kala iibsiga xagaaga oo xalay ku ekaa dhammaystirtay saxiixa xiddiga reer Spain ee Saul Niguez, waxaana ay kula soo wareegeen amaah hal xilli ciyaareed ah.
Laacibkan khadka dhexe ee Saul Niguez ayaan doonaynin markii hore inuu ka tago Kooxda Atletico Madrid, laakiin waxaa lagula tagay inuu tago.
“Waxaan weydiistay inaan u tababarto booskeyga, waana uu diiday”, xiddiga amaahda ugu soo biiray Chelsea ee Saul Niguez ayaa shaaca ka qaaday in Tababare Diego Simeone uu ku qasbay inuu isaga tago Atletico Madrid.
Saul Niguez ayaa bannaanka soo dhigay sida uu Tababare Diego Simeone u diiday inuu Atletico Madrid kaga ciyaaro booskiisa saxda ah, taasoo keentay inuu amaah ugu biiro Kooxda Chelsea.
Go’aanka uu Saul ugu soo biiray Chelsea, waxaa door muhiim ah ka ciyaaray Goolhayaha Blues ee Kepa Arrizabalaga.
26-sano jirkaan reer Spain ayaa xiriir dhow oo saaxiibtinnimo la leh Saul oo iyagoo da’yar ay ka wada tirsanaayeen xulka qaranka Spain.